ဘူးသီးတောင် မောင်တော အခြေအနေ အလွန် စိုးရိမ်ရ .. | ngalone
ဘူးသီးတောင် မောင်တော အခြေအနေ အလွန် စိုးရိမ်ရ ..
ဘူးသီးတောင်-မောင်တော တွင် ကုလားများ၏အန္တာရယ်ကို စိုးရိမ်နေရသည် ။ မြို့နယ်နှစ်ခုလုံးတွင် ..တောင်ကုတ်တွင် သေသွားသော ကုလားဓါတ်ပုံများကို ဖြန့်ဝေ လှုံ့ဆော် လျက်ရှိသည်။ ၆-၆-၁၂ ညနေပိုင်းတွင် ဘူးသီးတောင်မြို့ အနောက်ကွင်း နှင့် နတ်ပင်ရင်း ခွဆုံနေရာများ တွင် ကုလားများ အုပ်အုတ်သောင်းသောင်းစုဝေးခဲ့သည်။ လူအင်အား ၅၀၀ နီးပါးရှိသည်။ ဗလီများတွင် လည်း အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ရှိရှိသမျသော ကုလားဈေးဆိုင်များသည်ပုံမှန် ည ၁၂ တိုင်အောင်ဖွင့်သော်လည်း ထိုနေ့တွင် ညနေ ၅ နာရီလောက်တွင် အံသြဖွယ်ရာ ပိတ်သွားခဲ့သည်။ ကုလားရွာ ရခိုင်ရွာ ..အားလုံးတိတ်ဆိတ်နေသည် ။ ရခိုင်အိမ်များကို မီးတိုက်မည် ဟု သော သတင်းများလဲ ကုလားများထံမှ ရသည်။ မြို့ပေါ်ရှိသမျှသော ရဲသားများက အရေးပေါ်ကင်းလှည့်နေသော်လည်း ..ကုလားများ အားတင်လာလျင်မည်သို့မျှ ထိန်းနိုင်မည်မဟုတ်…။ ရခိုင်များ မိမိအသက်အန္တာရယ်ကို စိုးရိမ်နေရသည် ..။မိမိအသက်ကို ကာကွယ်ရန် ..ရပ်ကွက်တိုင်း ကင်းစောင့်ချထားရသည်။ ဘူးသီးတောင် ပန်းပဲဆရာတစ်ယောက်၏ ပြောပြချက်အရ ယခုရက်ပိုင်းတွင် ..ဆင်ထိုး လက်နက်များ ကို ကုလားများ လာရောက် အလုပ်အပ်နှံမှုများပြားခဲ့သည်ဟုပြောသည်။ ဓါးရှည် လက်နက်များကို လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုသော်လည်း အဆိုပါ ဆင်ထိုးလက်နက်များကိုမှု ဆင်များမောင်းနှင်ရန် အစိုးရမှ ခွင့်ပြုထားသည်ဟုသိရသည်။ မောင်တောမြို့တွင်လည်း လက်နှိပ်ဓါတ်မီးများကို ကုလားများ ၀ယ်ယူမှုများပြားကြောင်းသိရသည်။
(၇-၆-၁၂)နေ့တွင်ဘူးသီးတောင်မြို့ အထက ကျောင်းတွင် ပညာရေးဌာန အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာ .. ပညာရေးမှူးမှ နယ်ဘက်ကုလားရွာများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ၀န်ထမ်းများကို နီးစပ်ရာ ရွာကြီးများတွင် စုဝေးကာ နေရာချပေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိမိကျရာနေရာသို့ နေခင်းချိန်မှသာ သွားလာရန် စီမံထားကြောင်းသိရသည်။ သို့သော် ကျောင်းဆရာ/မ များမှာ အလွန်ထိတ်လန့်လျက်ရှိကြသည်။ အထူးသဖြင့် တောင်ကုတ်၊ ရမ်းဗြဲဘက်မှ လာသော ၀န်ထမ်းများမှာ အသက်အန္တာရယ်အတွက်အထူးစိုးရိမ်လျက်ရှိသည် ။NGO များတွင်လုပ်ကိုင်နေသော တိုင်းရင်းသားများမှာ မှု အထက်အကြီးအကဲမှ ..ဘာမှမဖြစ်ဟူသော စကားတစ်လုံးဖြင့် ..အထိတ်ထိတ်အလန့်လန့် ဖြင့် ကုလားရွာများသို့ အသက်စွန့် ကာ သွားလာ နေရကြောင်းသိရသည် ။ဆယ်ကျော်သက် ရခိုင်လူငယ်တစ်ယောက်ကို ကုလားလူငယ်များ စုဝေးရိုက်နှက်သောအမှုတစ်ခုလဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရခိုင်လူငယ်မှာ ခေါင်းပေါက်ပြဲသွားခဲပြီးဆေးရုံတွင် ကုသခံခဲ့ရသည်။ (၇-၆-၁၂) နေညနေတွင် ဘူးသီးတောင်မြို့တွင် လူထိန်းအင်အား(၈၀) ကို လက်နက်အပြည့်အစုံနှင့် နေရာချထား သည်။ (၈-၆-၁၂) ယနေ့တွင် ကုလားဈေးဆိုင်များ တဆိုင်မှ မဖွင့်၊ သေသွားသောကုလားများအတွက် ကျန်ရစ်သော ကုလားများက ဆုတောင်းကြမည်ဟုသိရသည်။ (၉-၆-၁၂) ရက်နေ့တွင် ဆယ်တန်းအောင် စာရင်းထွက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုနေ့တွင် ကျောင်းများတွင် ကျောင်းဆရာများကို ပါကင်းချထားမည်ဟုသိရသည်။
ယခုအခြေအနေသည် .ဘူးသီးတောင်၊မောင်တော မြို့နယ်များတွင်နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသား များအတွက်အလွန်အန္တာရယ်များသော အချိန်ဖြစ်သည်။ မိမိလုံခြုံရေး ၊မိမိအိမ်လုံခြုံရေး ၊မိမိရွာလုံခြုံရေး တို့ကို အလေးထားဆောင်ရွက်ကြပါရန် ။ကုလားများထက် လူဦးရေ အလွန်နည်းသောတိုင်းရင်းသားများမှာ မည်သူ့ကို အားကိုးရမည်မသိပဲ ..အထိတ်တလန့် ဖြစ်နေကြသည် ။မိမိအမျိုးကို မိမိတို့ ကာကွယ်ကြပါရန် …။
ကျွန်ုပ်ပြောချင်သည်မှာ ရခိုင်ဆိုသည်မှာ အသက်သေသည့်တိုင် အလံမလဲသော လူမျိုးဖြစ်သည် ။
12 responses to “ဘူးသီးတောင် မောင်တော အခြေအနေ အလွန် စိုးရိမ်ရ ..”
Annous | June 12, 2012 at 11:34 am | Reply
ရခိုင်ပြည်ကြီး၏ ရပ်နီး/ရပ်ဝေးတွင် နေကြကုန်သော ရခိုင်သူ/သား အပေါင်းတို့ စားကောင်းအိပ်ပျော်စွာဖြင့် အရိပ်ရသော နေရာတို့တွင် အေးချမ်းစွာရှိနေကြပါလော
မောင်းတောမြို့တွင် ရှိနေကြကုန်သော ရခိုင်ပြည်သား ညီအစ်ကို မောင်နှမများအား ကုလားတိရို့ နှိပ်စက် စော်ကားလို့ နေရာမရှိ အိမ်တိမီးလောင်လို့
စားစရာမဲ့ သောက်စရာမဲ့ နေစရာများ မဲ့လျက်ရှိပါတယ်
ကိုယ်ပြည့်က ကိုယ့်သွေးချင်းတိကို စော်ကားနီစော်ကို
SMITH | June 9, 2012 at 8:30 pm | Reply
we are M Y A N M A R
myat soe | June 9, 2012 at 11:26 am | Reply
matheint | June 9, 2012 at 9:26 am | Reply
ူ့လှိုင် | June 9, 2012 at 7:03 pm | Reply
Toe Wai Khaing | June 9, 2012 at 2:39 am | Reply
I am Burmese. I mean we are relatives. We have to protect our nation, nationality and our traditional signs. We Burmese always with Rakhine to protect our relatives( Rakhine Civilians). We are ready to apply it. Now we are waiting for our national leaders’ speech like as Daw Aung San Su Kyi, 88 Students…. Please keep Rakhine people away from Conflict Zone. Now all of you need to get Rakhine people out of conflict zone. All of you must take risk reduction for the first step. It will save many life of Rakhine People. Be safe..Rakhine
sanlinhtoo | June 8, 2012 at 10:18 pm | Reply
sanlinhtoo | June 8, 2012 at 10:15 pm | Reply
sanlinhtoo | June 8, 2012 at 10:13 pm | Reply
Myat Htut | June 8, 2012 at 7:11 pm | Reply
မင်း blog ကိုကာရန်တိုက်ပေးနေတယ်blog ကြီး
ဟိန်းမင်းသန့် | June 8, 2012 at 6:12 pm | Reply
ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို မောင်နှမများ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသလောက် ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးကြပါ။
ko oo | June 8, 2012 at 4:03 pm | Reply